Uyini umehluko phakathi kwesisekelo seplastiki nePVC flooring - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Uyini umehluko phakathi kwesisekelo seplastiki nePVC flooring
Manje abantu abaningi babiza ukufakwa kwamapulasitiki okufulela nge-PVC. Eqinisweni, leli gama alilungile.Obabili bahlukile, hhayi umkhiqizo ofanayo.
Eqinisweni, izitezi zepulasitiki ngokuvamile zenziwe ngezinto ze-polyurethane (PU). Zisetshenziswa kakhulu njengezinto zokwakha izinkundla zemidlalo yangaphandle nemijikelezo yepulasitiki. Ngenxa yokukhishwa kwamagesi ayingozi njenge-formaldehyde ne-toluene, phansi kwe-PU akulungele ingaphakathi lendlu Izinto ezibonakalayo ezisetshenzisiwe Ngaphezu kwalokho, iningi lalezi zisekelo zenziwa esizeni, aluqedi ukufakwa phansi phansi. Ngokokukhuluma ngokuqinile, ipulasitiki phansi libhekisa esitezi esingenhla, hhayi esitezi sePVC.
Iphansi le-PVC libhekisa esitezi esakhiwe ikakhulukazi ngezinto ze-PVC (polyvinyl chloride), ezaziwa nangokuthi ipulasitiki .. Ngenxa yamagama ahlukahlukene asetshenziswa njengamanje, abanye abantu bayibiza ngokuthi irabha floor, floor floor board, floor rubber, floor composite, floor lesikhumba (single Kubhekiselwa esitezi esihlanganisiwe), igama eliqondile kufanele libe phansi kwe-PVC.
Izici zokwenziwa kwesitezi se-PVC: igxathu elintofontofo, ukumelana nokuthamba, anti-slip, umsindo ukufakwa kanye ne-anticorrosion, imibala ecebile; ukumelana okuhle kakhulu kwe-abrasion, ukungaholi kwamanzi, kanye nokumelana kwamakhemikhali. Akuthintekile ukunyakaza kwemishini, ukuhamba kwezimoto nokuhamba kombhede ohambayo. Ukuphikisa okungaphezulu kwe-PVC engamabhande kungama-104-106 ohms, kanti nezinto ezibonakalayo zisatshalaliswa ngokulingene ngaphakathi komkhiqizo, ngakho-ke kuqinisekisa umsebenzi wokuhlala isikhathi eside.Ukuphakama kwesisekelo se-PVC: ezokwelapha, ezemfundo, imboni, ezokuhamba, ezemidlalo, ezentengiselwano, izinhlangano zikahulumeni, amahhovisi, Izitolo, njll.
I-PVC flooring iyithuluzi eliphansi eliphakeme lobuchwepheshe obuphakeme embonini yezinto zokwakha emhlabeni. Kusetshenziswe kabanzi kumaphrojekthi wokuhlobisa angaphandle. Selokhu yangena ezimakethe ezifuywayo ngawo-1980s, yakhuthazeka kakhulu. Manje isetshenziswa kabanzi kwezamabhizinisi (izakhiwo zamahhovisi, izinxanxathela zezitolo, izikhumulo zezindiza,), ezemfundo (izikole, imitapo yolwazi, izinkundla zezemidlalo), umuthi (izitshalo zemithi, izibhedlela), amafektri nakwezinye izimboni, futhi uzuze ngokwenelisayo. Umphumela, inani lokusetshenziswa liyanda.
Njengamanje, ukubeka phansi kwe-PVC kusetshenziswa kabanzi futhi kuvame ukubonakala emakethe yasekhaya .. Okungenhla ngomehluko phakathi kwesisekelo seplastiki nesisekelo sePVC.
Uyini umehluko phakathi kwesisekelo seplastiki nePVC flooring Okuqukethwe okuhlobene